Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Emergencylọ Mberede New York: Un-American, scandalous, and አደገኛ
Inweta njem nleta • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Safety • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Lọọgwụ - Lelee ma mụta site na ụlọ ọrụ ile ọbịa
“Adịla na-arịa ọrịa na New York City… na-arịa ọrịa nke na ịchọrọ nlekọta mberede,” ka Dr. Elinor Garely dọrọ aka ná ntị. Ọ na-atụ aro na “italslọọgwụ na-elegara ụlọ ọrụ ile ọbịa anya maka nduzi na ntụzịaka ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị ime ka onye ọrịa na-arịa ọrịa bụrụ ezigbo onye ọbịa.”
Ozi nyocha nke New York State na-egosi na ihe karịrị nde mmadụ 4 na-eme nleta nde 7 kwa afọ na ngalaba mberede ụlọ ọgwụ.
Echiche, dabere na ọtụtụ telivishọn ER usoro ọgwụ, bụ oge ochie nke etu esi eme ọgwụ mberede na New York.
Lọọgwụ kwesịrị ilegara ụlọ ọrụ ile ọbịa anya maka nduzi na ntụzịaka ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị ịtụgharị onye ọrịa na-arịa ọrịa ka ọ bụrụ onye ọbịa dị mma.
Ndị njem azụmahịa na ndị njem nleta na-arịakarị ọrịa mgbe ha na-eleta mba ọhụrụ na obodo ọhụrụ. Oku ekwentị na oche nke ụlọ nkwari akụ, ma ọ bụ oku ngwa ngwa nye enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị nwere ike ọ gaghị enye onye nlekọta ahụike ngwa ngwa iji dozie nsogbu ahụike ozugbo. Ihe a ga-eme? Ka ọ dị ugbu a, nzaghachi ngwa ngwa bụ ịga ozugbo na Nlekọta Ngwa ngwa ma ọ bụ akụkụ ER / ED nke ụlọ ọgwụ kacha nso.
eTurboNewsOnye na-ede akụkọ .com, Dr Elinor Garely, nwa amaala New Yorker, nwetara nhụjuanya n'oge na-adịbeghị anya site na ọgwụ mgbochi COVID nke abụọ ya, ma jiri izu 6 gara aga na-agakwuru ndị dọkịta na ụlọ ọrụ ER na-achọta nnukwu ọdịiche dị n'etiti atụmanya nke nlekọta ahụike na Manhattan na eziokwu.
Dr. Garely na-akọrọ anyị ahụmịhe ya na ihe ọ hụrụ mgbe ọ na-ekwu banyere ọgba aghara nke ọnọdụ nlekọta mberede na Manhattan na-enwe olileanya na ndị ọbịa n'obodo ahụ ga-ahụ ụzọ nke ahụike ma zere (ma ọ bụ n'akụkụ) ụfọdụ n'ime nnukwu olulu dị na ha ụzọ mgbake.
Garely na-achọpụta na "Ọ bụ ihe nwute na ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ anaghị etinye oge na mbọ dị ukwuu n'ịchọpụta usoro iwu na usoro ụlọ ọrụ ile ọbịa ebe ndị ọbịa na-elekwasị anya na ọrụ yana obere oge na ịnwa ịbawanye ego na-emebi emebi ma na-ezighi ezi."
Nke a bụ akụkọ ya n'okwu nke aka ya.